Isichazi magama esivela kuYilo loMzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isichazi-magama samagama avela kuYilo loMzobo
Yiba nelungileyo Isichazi magama kunye neentsingiselo zoyilo lwegraphic, zinokunceda ekuququzeleleni izinto kakhulu, kuba kunokwenzeka ukuthintela nayiphi na iprojekthi enxulumene ne ukuthengiswa kwedatha.
Ke kule posi siza kuthetha ngeendlela ezininzi ze amagama asisiseko kwilizwe loyilo lwegraphic.
Imigaqo yoyilo loMzobo
Umzobo: Iqukethe a ulwandlalo olusisiseko okanye umgca weengcinga Ngokwenza ukuba ukubonwa kwangaphambili kweprojekthi kunokwenzeka.
Intloko: Ingaba u isihloko esiphambili esifunyenwe kuqweqwe yalo naluphi na upapasho, nakumacandelo afanelekileyo.
Utyhafile: Ibhekisa kwi utshintsho lwee-shades okanye phakathi kwemibala emi-2 ngendlela eyalelweyo kwaye ngaphandle kombala.
Uyilo lomhleli: Ubeko, ukuhlelwa nokucwangciswa kweempapasho ezithile ezinjengeencwadi okanye iimagazini.
Uyilo lomzobo: Imalunga ne yenza kunye neprojekthi usebenzisa imifanekiso, imiyalezo enobuntu kunye nokuzazisa.
Uyilo lwentengiso: Iqukethe ubeko Ezi mpapasho sele ziprintiwe kwaye zikwasetyenziselwa ukuxhasa olunye usasazo.
Isibhengezo sentengisoInqanaba lokuchonga apho zombini injongo yentengiso, Njengamaxabiso ophawu oluthile, ngendlela yokuba zimelwe ngendlela emfutshane.
Flyer: Yi isixhobo sokuthengisa esetyenziselwa ukubhengeza okanye ukubonisa imveliso / inkonzo enikezelwa ngophawu okanye yinkampani.
Icon: Ngaba imiqondiso esetyenziselwa ukubonisa umbono othile abadityaniswa nazo, nokuba kungokuzazisa okanye okunye ukufana.
Isazisi seNkampaniLudibaniso lwegama lophawu kunye neekhowudi zokuziphatha elinazo.
Imifanekiso yomdibaniso: Ngu umfanekiso weengcinga ukuba uluntu lubone ngohlobo oluthile.
Inkcaso: Iqukethe a isixhobo sonxibelelwano olubonakalayo isebenza ngokufanelekileyo, kuba yenziwe ngolwazi olumelwe ngokubonakalayo, ngemizobo, imizobo kunye neendidi ezahlukeneyo zeesimboli.
EzintshaLutshintsho olukwaziyo ukongeza izinto ezintsha, ukongeza kwisindululo esitsha sokuphunyezwa koqoqosho.
Izizathu zokuchwethezaAyibhekiseli kuphela izithuba ezifumaneka phakathi kwamagama, kodwa nakwizithuba eziphakathi koonobumba.
Iimpawu: Iqukethe ukucaciswa kwegama ezenza igama lenkampani.
IBitmap: Yenziwe ngamanqaku athile abekwe ngobuchule ekudaleni i- uxande okanye imilo yematriki.
Merchandising: Ibhekisa kwi cwangciso so shishino esekwe kukhuthazo lweemveliso ezahlukeneyo.
Iphalethi yombala: Sesinye sezixhobo ezisisiseko kwihlabathi loyilo lwegraphic, esetyenziselwa yenza indibaniselwano okanye imixube yemibala enokubonakala intle kunye.
IphikseliImalunga ne- iyunithi esisiseko yomfanekiso ovavanyiweyo kwiscreenOko kukuthi, ngamachaphaza anemibala enza umfanekiso, ngomgaqo-siseko we-matrix yeepikseli ezininzi eziqhubekayo.
Publicidad: Yindlela unxibelelwano olungengomntu, ukongeza kwindlela yokusasazwa kolwazi, izimvo kunye nemibono, ngenjongo yokweyisela abantu ekujoliswe kubo, ngendlela yokuba bakhumbule kwaye benze isenzo esithile.
Uhambo: Kwintsimi ye-typography, yindawo emhlophe ephakathi kwemifanekiso kunye neetekisi.
Isilika yesikrinia: Iquka ubuchule bokuprinta Isetyenziswa kwinkqubo yokuvelisa kwakhona zombini iitekisi kunye nemifanekiso, apho i-inki idluliswa kusetyenziswa umnatha wolulelwe ngaphakathi kwesakhelo.
Ukusetyenziswa: Lixesha apho kunokwenzeka ukulinganisa umgangatho wewebhusayithi Ngexesha lokubonelela ngamava asemgangathweni kubasebenzisi abangena.
Njengoko sele ubonile, kukho ifayile ye- Inani elikhulu lemigaqo ezisetyenzisiweyo kuyilo lwegraphic kwaye kusenokwenzeka ukuba silibele elinye igama. Ukuba kunjalo, ungalibali ukusazisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Isichazi-magama samagama avela kuYilo loMzobo
Uyilo lweenkqubo? Dibana neAdobe Spark
Khuphela kwaye usebenzise iibrashi ukwenza umsi kwiFotohop